Mhoroi, muchidzidzo ichi cheGerman, isu tichataura nezvemiriwo muchiGerman (die Gemüse). Tichadzidza iwo singulars uye zvakawanda zvemiriwo muchiGerman. Chekutanga pane zvese, isu tichadzidza chiGerman chemiriwo akajairika. Ndichiri kudzidza Vezvirimwa zveGerman, isu tichadzidza pamwechete nezvinyorwa zvacho. Uye zvakare, isu takagadzirira iwe inoyevedza mifananidzo yemiriwo muchiGerman.
Iye weGerman wemakomborero akaisvonaka, miriwo ine mavara uye nzungu izvo Ishe vedu vakatipa isu. nezvose zviri zviviri uye zvakawanda tichadzidza. Muchidzidzo chedu chekare German Zvibereko Takaongorora nyaya yacho. Takadzidza michero nezvakanaka zvinoonekwa uye takaita mitsara yechiGerman nezve michero. Iye zvino tichadzidza chiGerman chemiriwo nenzira imwecheteyo.
Mushure mekudzidza maGerman miriwo, isu tichagadzira mitsara yakapusa yeGerman nezve iyi miriwo yatakadzidza isu patinotsvedza takananga kuzasi kwe peji.
Musoro wemiriwo muchiGerman unowanzo dzidziswa mugiredhi re9 kana regumi. Iyi kosi ichave yevadzidzi vanodzidza chiGerman vari vega, 10th giredhi vadzidzi uye yegumi giredhi vadzidzi. betira
Miriwo yeGerman izvozvi nezvinhu zvavo zvese pamwe nehumwe uye zvakawanda Ngatidzidzei miriwo yeGerman imwe neimwe.
GERMAN VEGETABLES MUFANANIDZO Wenyaya
KUFA ZWIEBEL - HONI
KUFA KARTOFFEL - HATATU
KUFA GURKE - SALATALIK
FA AUBERGINE - CHIWANDA
DER KOHL - KABHUKU
KUFA HASELNUSS - HAZELNUT
FA WALNUSS - WALNUT
KUFA MANDEL - ALMOND
KUFA ZVAKANAKA - PISTACHIO
DER MAIS - IJIPITI
Muriwo wechiGerman (Gemüse) Musoro wedu wenyaya wakanangana nekubva mumusoro. Zvichava zvinonyanya kubatsira iwe kana iwe ukajaira kushandisa mazwi iwe awakabata nemusoro nenzira yakakodzera kwazvo iwe pachako mushure memutsara. Tinodawo kutaura nezvenyaya iyi kuti iwe unofanirwa kunyatsobata nemusoro mazita echiGerman emiriwo pamwechete nezvinyorwa zvavo. Hazvina mhosva kuti mitsara yakanaka sei yaunogadzira nemazwi aunoshandisa usina chinyorwa, zvinogona kusanzwisiswa nemumwe munhu waunoda kuudza. Izvi zvinotungamira kumagumo ekuti mutongo waunofunga kuti wakanaka chaizvo hauna zvazvinoreva.
MIJEREMANI MITAMBO MUTAfura
Mumifananidzo iri pamusoro, takaedza kusanganisira miriwo yakajairika yatinowanzoshandisa. Iye zvino ngatitambanudzirei runyorwa rwedu rwemiriwo muchiGerman uye tigoisa patafura kuitira kuti iwe ugone kuvaona vese pamwechete.
kufa gurke Cucumber
kufa Tomate madomasi
die Kartoffel matapiri
die Zwiebel nehanyanisi
der Knoblauch hadiyo
der Salat Saladi, Lettuce
der Blumenkohl konifurawa
der Rosenkohl Brussels inomera
kufa Karotte makarotsi
der Kurbis Nhanga
die weisse Bohne Bhinzi yebhari
die grüne Bhine Bhinzi dzakasvibirira
die Erbse pizi
kufa Aubergine eggplant
kufa Artischocke Artichoke
anodaro Dill Dhiri
Ehe, panogona kuve nemiriwo yakawanda yatisingafunge nezvayo panguva yekugadzirira chidzidzo ichi. Nekudaro, izvo zvinokwana kudzidza iyo yakanyanya kushandiswa uye inopedzwa miriwo muchiGerman pakutanga. Kuwedzera mimwe miriwo inogona kudzidziswa kubva kumaduramazwi eGerman gare gare pazvinenge zvichidikanwa. Iye zvino ngatifambei tichienda kune yedu yemitauro mienzaniso nezve miriwo muchiGerman.
SAMPLE SENTENCES NEZVEGERMAN VEGETABLES
VeGerman Miriwo Sample Makodhi
Zvino ngationgororei chinoonekwa chatakaona. Mukomana ari pamufananidzo "Ich esse nicht gern Gemüse"Anoti. Saka;
Ich esse nicht gern Gemüse : Handidi kudya muriwo
Kana kana iye aida kutaura zvinopesana, ndiko kuti, Ini ndinoda kudya muriwo, aizozvitaura sei?
Ich esse gern Gemüse : Ndinofarira kudya muriwo
Musiyano uripo pakati pemitsara miviri iri pamusoro uri mumutsara uyu "kweteZvinobva pashoko rekuti ”. Sezvauri kuona "kweteIzwi iri ”rinowedzera kushaya hanya pachirevo.
Zvino ngatiitei mimwe mitsara yakaita seiyi. Tarisa uone zvirevo zvemuenzaniso pazasi.
Ich esse gern Maise : Ndinofarira kudya chibage
Ich esse gern Karotten : Ndinofarira kudya karoti
Ich esse gern Zwiebeln und Kartoffeln : Ndinofarira kudya hanyanisi nematapiri
Ich esse gern Obst und Gemüse : Ndinofarira kudya michero nemiriwo
ich esse kwete gern maise : Handidi kudya chibage
ich esse kwete gern Karotten : Handidi kudya macarrots
Ich esse nicht gern Zwiebeln und Knoblauchen : Handifarire kudya hanyanisi negariki
Sezvinogona kuonekwa mumuenzaniso wekuenzanisira pamusoro pemiriwo muGerman pamusoro, mumitsara yakadaro, huwandu hwezvinhu hunogara huchishandiswa. Ngatipei mumwe muenzaniso.
Mumufananidzo uri pamusoro, mwana "Ich mag kein Gemuse. ich mag Obst"Anoti. Saka "Handidi miriwo. (Handidi miriwo). Ndinofarira michero."Anoti. Saka nei "nicht" yakashandiswa kugadzira chirevo chisina kunaka mumitsara yapfuura yemuenzaniso uye ungangodaro wakafunga kuti "kein" yakashandiswa pano. Ngatizvitsanangure zvinotevera; Mumienzaniso yapfuura mitsara izwi rekuti "nicht" raingove pamberi pechiito "gern". Mumutauro wechiGerman, "nicht" inoshandiswa kugadzira zviito zvisina kunaka. Mumutsara apa, tinoti "Ich mag kein Gemüse". Sezvo izwi rekuti gemüse riri zita, mumutsara uyu "kein" rinoshandiswa pachinzvimbo che "nicht" pamberi peshoko rekuti gemüse. Isu takapa mienzaniso yekushandisa kwese.
INFORMATIVE SENTENCES NEZVEGERMAN VEGETABLES
Ruzivo nezve Tomato muchiGerman
Iye zvino ngationgororei mitsara iri mumufananidzo uri pamusoro:
Es is rot : Icho chitsvuku
Es is saftig : Iye ane muto
Es hat Kalium, Magnesium, Vitamin A uye Vitamin C : ANO; Ine calcium, magnesium, vhitamini A uye vhitamini C (ine, zvinoreva kuti ine)
Kwete: Sezvo madomasi dzimwe nguva achiverengwa pakati pemichero uye dzimwe nguva pakati pemiriwo, tinozvitsanangura semichero mumufananidzo uyu. Kana tichireva kuti muriwo "Das ist ein GemuseTinofanira kunyora se ”.
Ruzivo nezveGerman mhiripiri
Das ist ein Gemuse : Uyu ndiwo muriwo
Es ist grün und lang : Akasvibira uye akareba
Heti Hat Vitamin C : Iine vhitamini C (inayo, inayo)
Ruzivo nezveGerman Karoti
Es is lang : Akareba
Es ist orenji : Iye orenji
Es hat Vitamin A, Vitamin B, Vitamin D uye Vitamin E : ANO; Ine vhitamini A, vhitamini B, vhitamini D uye vhitamini E.
Ruzivo nezveGerman Onion
Es hat Phospor, Vitamin A, Vitamin B uye Vitamin C : ANO; ine phosphorus, vhitamini A, vhitamini B uye vhitamini C
Ruzivo rweGerman Mbatata
Es is oval uye gehena rakajeka : Rakatenderera uye rakajeka shava
Es hat Kalium uye Vitamin B : ANO; Inosanganisira calcium neB mavitamini
Ndiyo lecker : Zvinonaka
Vadiwa vadzidzi, muchidzidzo chino, taona miriwo muchiGerman kusvika zvino uye takanyora zvirevo zvemuenzaniso nezvemiriwo yechiGerman. Ngatinyororei mashoma akanyorwa pazasi maererano neruzivo rwechiGerman, kunyangwe hazvo isina hukama chaihwo nenyaya iyi.
ZVINHU ZVOKUZIVA NEZVEGERMAN VEGETABLES
Vadiwa shamwari, pamusoro, isu takapa maGerman miriwo zvese zvinoonekwa uye mune tafura fomu. Ehezve, aya mazwi anoda kuverengerwa, semazwi ese echiGerman, pamwechete nezvinyorwa zvavo uye zvakawanda zvavo. Pamusoro pezvo, takazvitaura muzvidzidzo zvedu zvekare, asi ngatipei rumwe ruzivo nekuyeuchidza zvakare kuti panogona kunge paine shamwari dzisingaverenge. Pamwe yakabata pfungwa dzako uchiongorora mifananidzo iri pamusoro.
Iko hakuna capital ini uye mavara madiki I mune echiGerman alfabheti. Mune mamwe mazwi, tsamba i haina yepamusoro uye yakaderera tsamba ini tsamba. Naizvozvo, seshoko rega rega, unofanirwa kungwarira nezve chiperengo chemiriwo yeGerman
Takazvitaura muzvidzidzo zvedu zvekare. MuGerman, kunyangwe zita riri zita chairo kana zita rejenasi, tsamba yekutanga inofanirwa kuve yakadomwa. Sezvinoonekwa mune zviri pamusoro zvinoonekwa uye patafura, iwo ekutanga emazita eGerman emiriwo anogara achidanwa. Mutemo uyu unoshanda chete kumazita, asi kwete kwezvipikisheni, zvirevo, zvirevo, zviito.
Shamwari dzinodiwa, Muchidzidzo chino pamiriwo muchiGerman;
Takadzidza miriwo yeGerman pamwe nezvinyorwa zvavo.
Takadzidza imwechete uye yakawanda yemiriwo muchiGerman.
Takadzidza kunyora mitsara inogona kupa ruzivo nezve miriwo muchiGerman.
Takadzidza kunyora mimwe mienzaniso mitsara pamusoro pemiriwo tichishandisa zviito zvakare.
Ndo zvese zvatichakupa nezve miriwo muchiGerman. Iwe unogona ikozvino tarisa zvimwe zvedu zvidzidzo. Tinokuda iwe rombo rakanaka.
10. kirasi german nyaya inotaura10th giredhi maGerman miriwo11th giredhi maGerman miriwo9. kirasi german nyaya inotaura9th giredhi maGerman miriwoChiGerman Mögen mitsaraine german miriwo zvinyorwanemhando dzakasiyana dzemiriwo yeGermanmiriwo mitsara muchiGermanchimiro chimiro chidzidzo chinyorwaVeGerman Miriwo Sample MitsaraUsatsanangure miriwo yeGermanmitsara yekuzivisa maGerman miriwoyakawanda yemiriwo muchiGermanich mag mitsaramiriwo german